Mothers Day sms,Mothers Day greeting, flowers for Mothers's day, Mothers's day flower, flower for Mothers, Mothers's day, Motherss day, Mothers's day 2013, Mothers's day celebration, Mothers's day gifts, Mothers's day india, Motherss day celebrations, Mothers's day poems, Mothers's day date, Mothers's day cards, Mothers's day date 2014, happy Motherss day, Mothers's day gift ideas, Mothers's day message, Motherss day quotes, Mothers's day special, Mothers's day Nepal,Fathers Day card,Happy Father's Day,boy wallpapers,city wallpapers,sport wallpapers,abstract wallpapers,car wallpapers,animal wallpapers,game wallpapers,holiday wallpapers,technology wallpapers,nature wallpapers,travel wallpapers,cartoon wallpapers,airplane wallpapers,flower wallpapers,nepali artist wallpapers, happy dashain wallpapers, dashain wallpapers, happy dipawali wallpapers, dipawali wallpapers, happy valentine day, valentine day wallpapers, nepali models wallpapers, nepali singers wallpapers, nepali landscape wallpapers, nepali background wallpapers
Mothers Day SMS & greeting 2013
आज मातातिर्थ औशी अथवा आमा को मुख हेर्नी दिन । मेरी आमा जसले मलाइ जन्म दिनुभो, उहाले मलाइ दुध खुवार हुर्काउनु भो, आफु भोको पेट रहेर मलाई पेट भरि खुवाउने आफना चाहना अपुरो राखेर मलाई खुसि बनाउने मेरी आमाको न्यानो माया पाएर यो धर्ति मा बाँचेको छु, आमाको मुख हेर्ने दिन मेरो लागि सबै भन्दा ठुलो चाड नै हो तर पनि म आज मेरो आमा संग टाढा छु, जे होस् मेरो सम्पूर्ण खुसि हजुर को लागि हो आमा । आज मातृ औसी सबैको लागि आफ्नो आमा सर्वस्व हुने यो पावन अवसरले सबैमा आफ्ना माता प्रति सदभाव जागोस भन्दै मद्र डे को अवसरमा मेरी आमा को सुसस्थ्य र दिर्गायुका लागी भगवान संग प्राथना गर्दछु ।
धन्यबाद आमा !
हामी छोरा छोरीलाई जन्म दिएर
आखिर आमा ! तपाईले के पायौ ?
हामीलाई त्यो मुटुमा फलाएर
आखिर आमा ! तपाईले के खायौ ?
आमा ! हामीलाई माफी गरिदेउ
हामी तपाईको कहिलै निको नहुने
संधै र्चाकाईरहने कोखीको घाऊ हँ
हामी तपाईको त्यो कहिलै नमेटिने
तपाईको तातो रगतले लेखेको नाऊ हुँ
आमा ! तपाईलाई धन्यबाद !
हामीलाई संसार देखाई दिएकोमा
हामीलाई यो धर्ती टेकाइ दिएकोमा
हामीलाइ यो पटक जन्म दिएकोमा
उहि मृत्यु पनि सिकाइ दिएकोमा
आमा ! हामी संधै बिन्ती गर्छु
आमा ! स्वार्थी र मतलवी छोरा छोरीलाई नसरापी दिनु
बिशाल काख र अपार मायाँ हामीलाई नै साँची दिनु
आमा ! दुधको ऋण हामी अर्को जुनिमा त तिर्न पाऊ
साँच्चै आमा ! फेरी अर्को जन्म पनि तपाईकै छोरा छोरी हुन पाऊ!!!